Ezezindlu - Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie
Cofa apha ukuze ufumane izibonelelo ezisemthethweni ezinxulumene nemicimbi yezindlu ye-COVID-19
WONKE UMNTU UFUNEKA INDAWO EKHUSELEKILEYO NEYISIGQIBO UKUFOWELA EKHAYA
Kwi-Prairie State Legal Services, sinceda abathengi bethu ukuba basombulule imiba enzima yezindlu, kubandakanya ukugxothwa, iimeko zokuhlala ezingakhuselekanga, ukwaliwa kwezibonelelo zezindlu ezixhaswayo, kunye nokuvalwa okungalunganga kwezixhobo.
IINKONZO ZETHU ZIBandakanya NONCEDO:
Izindlu ezixhaswa ngemali
Indawo yocalucalulo neyokukhubazeka
Ukugxothwa kwiipaki zasekhaya ezihambayo
Ukugxothwa ngabanini-mhlaba babucala
Ukukhuselwa kwezindlu kubantu abadala, amagqala, abantu abaphila ne-HIV / AIDS
Utshilo, irhafu yepropathi kunye neminye imiba yobuninimzi
Sifumana inkxaso-mali ekhethekileyo yokuqhuba unyanzeliso lweZindlu oluLungileyo, ukuvavanya, kunye nemfundo kwiindawo ezininzi kwiindawo zethu zenkonzo.
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya malunga neProjekthi yeZindlu eziLungileyo
Usapho nokhuseleko. Ubusazi malunga nekota enye (26%) yawo onke amakhaya anemivuzo ephantsi afumene ubuncinci ingxaki enye enxulumene nemicimbi yosapho okanye ukhuseleko lomntu. Ukuxhaphaka kuphezulu kakhulu kumakhaya anabantwana abangaphantsi kweminyaka eli-12 (44%). Ezona ngxaki zixhaphakileyo kuyo yonke imizi kulo mmandla zibandakanya amava obundlobongela basekhaya (obuchaphazela i-10% yayo yonke imizi), iingxaki zokuqokelela okanye ukuhlawula inkxaso yabantwana (9%), kunye nokwahlukana okanye uqhawulo-mtshato (9%). Umthombo: LSC 2021 Justice Gap Measurement Survey	... Bona OkuninziJonga ngaphantsi